Umdlali welePSL kulindeleke asayine isivumelwano neqembu elikhulu laphesheya | News24
Umdlali welePSL kulindeleke asayine isivumelwano neqembu elikhulu laphesheya
Cape Town – Umdlali wasemuva we-Ajax Cape Town, uRivaldo Coetzee, kulindeleke ukuba asayine sivumelwano esikhulu nekilabhu engompetha yaseScotland, iCeltic, esontweni elizayo ngemuva kodaba lokuhamba kwakhe oseludonse isikhathi eside.
Lo mdlali weBafana Bafana oneminyaka engu-20 ubudala kubukeka sengathi usethole isivumelwano ekade salindelwa neqembu lase-Europe, njengoba ukuya kwakhe kuleli qembu eliqeqeshwa ngu-Brendan Rodgers kulindeleke ukuthi kumenyezelwe kuleli sonto.
Imithombo engaphakathi kuleli qembu elizinze eKapa ikuqinisekisile kwiSport24 ukuthi uCoetzee uzohamba aye eScotland ngesonto elizayo futhi sekuseduze kakhulu emenyezelwe njengomqeqeshi weCeltic.
OLUNYE UDABA: USteven Piennar ufuna ukwenzisa okukaMcCarthy esadlalela iPirates
Lo mdlali owaphekwa eqenjini lokuthuthukisa abafana abancane kuma-Urban Warriors, obedlala ngesikhathi leli qembu lidlala ngokulingana ngo-1-1 neGolden Arrows ngoMgqibelo, kubikwa ukuthi uchaze ithimba leCeltic elithungatha abadlali ngokukwazi kwakhe ukudlala ibhola esuka emuva.
URodgers usanda kuphawula kwabezindaba nalapho kwaqina khona izinsolo zokuthi lo mdlali sekusele kancane ajoyine leli qembu ngesikhathi ebuzwa yizintatheli ngemibuzo elokhu ikhule njalo kwabezindaba eNingizimu Afrika kanye naseScotland ngalesi sivumelwano sika­-Coetzee.
“Ngempela kumayelana nokutholakala komdlali,” watshela izintatheli.
“Sizobheka ukuletha izinga eliphezulu uma liba khona. Yinto ebesilokhu sisebenzela kuyona emasontweni ambalwa edlule.”
UCoetzee, nothathwa yiningi labaseNingizimu Afrika njengesitobha esihamba phambili ngemuva kukaLucas Radebe, usezodlalela enye yamakilabhu anomlando omkhulu e-Europe.
Uzophinde athole nokudlala kwiChampions League njengoba iCeltic kulindeleke ukuthi idlulele phambili esigabeni samaqoqo kulo mqhudelwano wase-Europe uma ngabe isibhekene ne-FC Astana, eKazakhstan, ngoLwesibili, njengoba isivele isihamba phambili ngo-5-0 ngemuva komlenze wokuqala.